श्रीमति प्रेमीसँग भागेपछि श्रीमानले पु’त्ला बनाएर गरे अन्तिम श्रद्धाञ्जली, छोराले लगाए आ’गो – PathivaraOnline
Home > समाज > श्रीमति प्रेमीसँग भागेपछि श्रीमानले पु’त्ला बनाएर गरे अन्तिम श्रद्धाञ्जली, छोराले लगाए आ’गो
श्रीमति प्रेमीसँग भागेपछि श्रीमानले पु’त्ला बनाएर गरे अन्तिम श्रद्धाञ्जली, छोराले लगाए आ’गो
admin February 6, 2020 समाज	0
भारतको बोकारो जिल्लाको तेलो थाना क्षेत्र निवासी राजिव कुमारले आफ्नी श्रीमतीको धोकाबाट रु’ष्ट भएर उनलाई सामाजिक बहिष्कारको सन्देश नयाँ तरिकाले दिएका छन् । श्रीमानको आरोप अनुसार उनकी ३२ वर्षीया श्रीमती आफ्नो प्रेमीसँग भागेकी छिन् । उनी अहिले आफ्ना प्रेमीसँग राँ’चीमा बसिरहेकी छिन् । यसबारे वि’रोध जताउनका लागि श्रीमानले हिन्दु रिति–रिवाज अनुसार श्रीमतीको पु’त्ला बनाएर उनको विधिपूर्वक अन्तिम सं’स्कार गरे ।
उनका छोराले आफ्नी आमाको पु’त्लालाई आ’गो लगाए । राजिवले अब उनका लागि उनकी श्रीमतीको मृ’त्यु भइसकेको छ । ‘अब मेरो उनीसँग र उनको मेरो परिवारका कोही पनि सदस्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन । मेरी श्रीमती दुई सन्तानकी आमा हुँदासमेत गाउँकै एक व्यक्तिसँग जनवरी ४ मा घरबाट भागिन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस : ६० वर्षका वृद्धको बिहे २३ वर्षकी युवतीसँग, हेर्नेको लाग्यो भीड !
श्रीमानले श्रीमतीलाई धोका दिएर दोश्रो विवाह गरेको खबर त हामीले सुनेका नै छौँ । तर के तपाईले एक श्रीमान श्रीमतीकै खुसीमा दोश्रो विवाह गरेको खबर सुन्नुभएको छ ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई बताउँछौँ । भारतको झराखण्डस्थित राजनगर जिल्लाका एक ६० वर्षीया वृद्धले २३ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरेका छन् । ललमोहन नाम गरेका ति वृद्धलाई छोरा जन्माउँन एकदमै रहर थियो ।
तर उनकी जेठी श्रीमती सरला महतोको कोखबाट छोरा नजन्मिएपछि उनले सरलाको सहमतिमै दोश्रो विवाह गरेका हुन् । सरला महतोबाट दुई छोरीहरु जन्मिए पनि उनलाई छोरा जन्माउँन अत्याधिक मन लागेकोले २३ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरेको लालमोहनले बताएका छन् ।
उनले अहिले २३ वर्षकी चेती महतोसँग विवाह गरेका हुन् । स्थानीय समाजसेवी रामरतनले लालमोहनको दम्पतिलाई पुत्र प्राप्ती नभएकै कारण चेती महतोसँग विवाह गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यामलाई बताएका छन् । यो अनौठो विवाह हेर्नका लागि मानिसहरुको भीड लागेको थियो । चेतीले निष्ठावान भएर पतिव्रता धर्म निभाउने वाचा गरेकी भारतीय सञचारमाध्यामहरुले जनाएका छन् ।
श्रीमति बिरामी भएपछि आफ्नै साली लिएर भागेका साली भेना काठमाण्डौमा यस्तो अवस्थामा भेटिए (भिडियो हेर्नुस् )
दैवकाे लिला यस्तो! नारायणीमा हाम फालेकि महिलाकाे जिउँदै उद्दार (भिडियो सहित)
डाक्टरको कुटाईबाट ज्यान गुमाएकी सुनिताले हस्पिटलको बेडबाट यस्तो भनेकी थिईन्, शरीर पुरै सुनिएको थियो, यस्तो थियो अवस्था